‘सरकारले हाम्रो आवाज सुन्न चाहेन’-टुरगानका अध्यक्ष बद्री नेपाल
‘सरकारले हाम्रो आवाज सुन्न चाहेन’-टुरगानका अध्यक्ष बद्री नेपाल - Nepal Talk
बैशाख ९ गते, २०७८ मा प्रकाशित
पर्यटन व्यवसायमा आबद्ध पर्यटक पथप्रदर्शक अथात टुरिस्ट गाइडको व्यवसायिक सवालमा केन्द्रिीत रहेर टुरिजम एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष बद्री नेपालसंग पार्वती खड्काले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा तँपाइको व्यवसायिक यात्रा कहिलेदेखि शुरु भयो ?
म दुइ हजार चार साल देखि पर्यटन क्षेत्रको यात्रमा छु । म धादिङमा जन्मेपनि काठमाडौंमा पढे हुर्के । मेरो मामाको ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्थे । बिस्तारै मैले सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गरे ।
कुन कुराले तँपाईलाई यहि पेशामा लाग्न हौसायो ?
मलाई रमाइलो लागेको चाँहि एकजना पर्यटकले दशौ हजार डलर खर्च गरेर सपना सकार पारिरहेको हुन्छ । नेपाल जाने घुम्ने यो चिज हेछु भन्ने उसको बर्षौको सपना पुरा गर्दै हुन्छ त्यो मौकामा हामी पनि पर्छाै क्या । उ जता–जता जान्छ हामी त्यतै जान पायौ । उसले जसरी मज्जा लिन्छ नि हाम्रा विषयबस्तुसंग हामीले पनि उत्तिकै रमाइलो गरिरहेका हुन्छौ । फरक यति हो कि उसले पैसा खर्च गरेर रमाइलो मान्छ भने हामी चाँहि पैसा पाइराखेका हुन्छौ ।
पर्यटक पथप्रर्दशक(गाइड)को अर्थ के हो?
यँहाबाट तँपाइ पोखरा जानुभयो, पोखराबाट बेसक्याम्प जानुभयो त्यँहाबाट बेसक्याम्बप जाँदा पैदल हिडेर जानुहुन्छ भने त्यँहा गाइड आवश्यक पर्छ । त्यो चाँहि ट्रेकिङ भयो गाइड आवश्यक पर्छ । तर पोखरा र आसपाससम्म मात्रै जानेका लागि चाँहि टुर गाइड चाहिन्छ ।
अहिले अठचालिससयको हाराहारीमा गाइडहरु उत्पादन भएका छन् । पचास प्रतिशत गाइडहरु बजारमा प्रवेश गरेका छन् । उनीहरु अहिले पनि सक्रिय छन् ।
पर्यटक पथप्रर्दशक(गाइड)हरुका लागि कस्ता खालका ट्रेनिङ आवश्यक छ?
यो नेपाल सरकार अन्र्तगतको एक संस्था जुन रबिभबनमा छ । यो एकमात्र संस्था छ । जसले टुरिस्ट गाइडलाई तालिम दिन सक्छ र यो बाहेक अरु कुनै पनि संस्थाले मान्यता पाएका छैनन् । सिट संख्या र आवेदक संख्याको आधारमा नाम निकालेर भर्ना लिने गरिएको छ । योग्यता भनेको चाँहि कुनै पनि विषयमा स्नातक तह पास गरेको हुनुपर्याे । तालिम लिएको आधारमा नेपाल सरकारले हामीलाई लाइसेन्स प्रदान गर्छ र परिचयपत्र दिन्छ अनिमात्र हामी बैधानिक पर्यटक पथप्रदर्शक अर्थात गाइड हुन्छौ ।
पर्यटन क्षेत्र थला बसेको छ । पर्यटक पथप्रर्दशक(गाइड)हरुका समस्याहरु पनि केलाउनुभएको होला ?
अब यो समस्याहरुका बारेमा दुई पाटाबाट चित्रण गर्न चाहन्छु । एक त सदाबहार समस्या छ भने अर्काे त लकडाउनका कारण थपिएको समस्या छ । अब बिद्यमान समस्या भनेको भौतिक पुर्वाधारका कुरा टवाइलेट, पार्किङका समस्याहरु छन् । एक जना पर्यटकले एउटा साइटमा जाँदा एक हजार पन्ध्र सय तिरेर गएको हुन्छ उसलाई आनन्दको सफा टवाइलेट हुदैन पार्किङ जस्ता विभिन्न खालका समस्याहरु आइराखेका हुन्छन् । गाइडहरुको इन्सुरेन्सका समस्या होलान् । रिफ्रेसमेन्ट तालिमको आवश्यकता होला । विदेशी पर्यटकहरुले पनि अनाधिकृत रुपमा गाइडिङ गरिरहेका छन् । नेपाली पनि विदेशी पनि अनाधिकृत रुपमा लाइसेन्स बिना काम गरिरहेका छन् ।
विदेशि पर्यटक पथप्रर्दशक(गाइड)हरु पनि छन् र?
यति भन्ने त छैन तर टुर लिडरका रुपमा ग्रुप लिएर आउने त्यो ग्रुपलाई फिल्डमा लगेर अनि आफैले गाइडिङ गर्ने यँहि बसेर गाइड गरेको मैले भन्न खोजेको होइन कि उतैबाट गाइड बनेर लिड गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरुको देशबाट ट्राभल एजेन्सीले पठायो होला, के होला । यसमा लाइसेन्स चेकिङको अभियानमा हामीलाई रोक्नलाई पनि अलि कठिन भयो किनकी यो त दुइ देशबिचको सम्बन्ध सम्म गासिँयो । फेरि यसको सम्बन्धमा ठयाक्कै नियमण गर्ने नसियत र प्रभावकारी दण्ड जरिवानाको लागि स्पष्ट कानुन पनि छैन् त्यसकारण पनि अलिकती समस्या चाँहि छ । अब हामी यसको थप समाधान खोजिरहेका छौ ।
पर्यटक पथप्रर्दशक(गाइड)को काम गरेर युवाहरुले कतिको आशावादी हुने सम्भावनाहरु छन्?
नेपालमा टुरिस्ट गाइडहरुको सम्भावना पचुर छ । धेरै अथाह सम्भावना भन्ने त नहोला तर एक हिसाबले सन्तोषजनक थियो । कोभिडले गर्दा सबैभन्दा धेरै मारमा टुरिस्ट गाइडहरु परेका छन् । हाम्रो सम्पुर्ण उद्योग नै धरापमा छ । झण्डै १३ महिना भइसक्यो गाइडहरुले रोजगार गुमाएको अवस्था छ । अझै कतिवर्ष बेरोजगार हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ता छ ।
पिडित पेशाकर्मीहरुलाई तँपाइ आवद्ध सस्थाले कतै केहि पैरवी गर्न सकेन?
अर्गनाइजसनको लिडरसिपको नाताले साथीभाइहरुलाई यि कुराहरुमा हामीले पहल नगरेको होइन । कतिपय अवस्थामा बाध्यता लिमिटेसनहरुले काम गर्न सकेनौ । हामीले बैकल्पिक रोजगारका लागि केहि हुन्छ कि भनेर पहल गर्याै । सरकारी तवरमा हामीले हाम्रो आवाज पुर्याउन नसकेको होइन । नितिगत रुपमा राहत प्याकेजका कुराहरु पनि आए हामी केहि आशाबादी भएको थियौ तर व्यवहारत केहि आउन सकेन् । त्यसकारण मलाई भन्न मन लाग्छ कि कोभिडमा नाममा अर्बौ रुपैँया गाँउगाँउमा बाडियो । जसले त्यो पाए ति गरिब थिए होलान, बिहान खाए बेलुका के खाउ भन्ने पनि थिए होलान् । नपाउने मान्छेले पायो त म नभनौला, तर ति सबै कोभिडका कारण पिडित थिएनन् ।, तर हामी वास्तविक पिडितले पाएनौ । जो कोभिडका कारण पिडित थिए तिनले केहि पनि पाएनन् र नपाउने खालको परिस्थिती बन्यो
राज्यले तँपाइहरुको अवाज सुनेन कि ?
होइन होइन राज्यले सुन्न नचाहेको हो हामीलाई । हामीले मन्त्रालयसम्म डेलिगेसन गयौ । पत्राचार गर्याै तर अँह हाम्रो आवाज राज्यले सुनेन् ।
अहिले टुरगानले सहजीकरण गर्न के–के काम गरिरेहेको छ ?
पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन गाइडहरुलाई रिफ्रेस गराइराख्ने । यो पेशाप्रति उनीहरुको लगावलाई जोगाइराख्ने यो क्षेत्रभन्दा बाहिर जानबाट रोक्न केहि गरिरहेका छौ ।
बिकृतीहरु के कती छन् त? गाइडहरुले पर्यटकप्रती देखाउने स–साना गलत व्यवहारले पर्यटन क्षेत्रलाई कतिको असर गर्छ ?
यो क्षेत्रमा बिकृतीहरु नभएको होइन । बिकृती कँहाबाट भएको छ हेर्न सक्नुपर्छ । सामान्य रुपमा मान्छेले बुझदाखेरी एअरपोर्टबाट होटल सम्म ल्रयाउने पनि गाइडकै रुपमा चिनिन्छन् । यो भन्दा हामी यो भन्दा हामी फरक छौ । व्याचलर पास भएको, स्नातक गरेर लाइसेन्स प्राप्त मान्छे मात्र हामी टुरिस्ट गाइड मान्छौ । आर्काे कुरा यँहि भित्रै पनि ठुलो जमात छ कतै गल्ती भए होलान् ।
मैले कुनै गेष्टलाई घुमाउन लगिराखेको छु भने त्यो गेष्ट र म बिचमा सिधा सम्पर्क हुँदैन त्यँहा कोहि एजेन्ट हुन्छ । एजेन्टको अनुमतीबिना त सम्भावना छैन् । एजेन्टले सबै ठाँउमा सहि गरे होलान भन्न सकेनौ ।
राज्यबाट तँपाइहरुको अपेक्षा के के हो त?
होइन अहिले पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउ भनेर त नहोला, समग्र विश्व नै थला परेको छ । गाइड साथीहारुको बिमाका कुरा, लोनको कुरा, राहत प्याकेजको कुरामा राज्यले राहत प्याकेजका बारेमा सम्बोधन गरिदियो भने पनि केहि उर्जा मिल्थ्यो ।
नेपालमा भएको स्थानिय श्रोत र साधन हाम्रा उतपादनहरु लोकल गुन्द्री, हलो जुवा, फुसका छाना पर्यटक आकर्षकका विषय हुन कि होइनन्? तँपाइ त झण्डै आधा विश्व घुमेको मान्छे के लाग्छ?
एकदम महत्वपुर्ण प्रश्न गरिदिनुभयो । हामी भन्दा धेरै कान्छा मुलुकहरुले पर्यटनको क्षेत्रमा धेरै प्रगती गरिसकेका छन् । म कतिपय मुलुकमा गएको छु । माल्दीभ्सकै कुरा गरौ न, उनीहरुसंग के छ र? हामीसंग त अथाह छ नि पुर्वाधारहरु त । कतिपय मुलुकहरुले हामीसंग सुन्दर सनसेट देखिन्छ । एउटा नरिवलको रुख छ भनेकै भरमा पर्यटक तानिरहेको छन् । देश धानिरहेका छन् । त्यसको तुलनामा हामीसंग त के छैन र ? पर्यटन क्षेत्रमा सरकारले पुर्वाधारहरु बनाउन सकेको छैन् । राजनितिक अस्थिरता, विश्वमा नेपालको छवि लगायतका कुराले अर्थ राखेको हुन्छ ।
सबैले आश गरेको संस्थामा हुनुहुन्छ तर तँपाइले निराशाबादी कुरा गरिदिनुभयो त? किन पहलकदमी लिन नसकेको हो?
नेपालको टुरिजम क्षेत्र कायापलट गराउछु भन्नता हावा गफ हुन्छ । मसंग सबैथोक छैन । हाम्रो हातमा केहि छैन । हाम्रो भिजन हामीले राखिसकेका छौ । अधिकारका लागि लाग्ने हो । डटेर लागेका छौ । सरोकारवाला र हामी बसेर पहलकदमी लिन्छौ । पर्यटन क्षेत्र प्रचुर सम्भाबना बोकेको पेशा हो । विदेश पलायन हुनुभन्दा यहि क्षेत्रमा सम्भाबना खोजौ ।